Qaramada Midoobay oo shacabka ugu hambalyeeysay xuska 55 guurada xornimada – Radio Muqdisho
Muqdisho, 1 Juulyo 2015: Ergayga Gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Kay ayaa hambalyo u diray dadka Soomaaliyeed iyo Dowladooduba, taas oo ku beegan 55 Guurada Madaxbanaanidooda. Wuxuu ammanay dadaalka ay wadaan dadka Soomaaliyeed, kaas oo ay xalinayaan labaatameeyo sanno oo degenaansho la’aan ah, iyo horumarka hadda ka socda (dalka) kaas oo lagu soocelinayo nabadda, laguna dhisayo Qarannimadaba.
Ergayga wuxuu soo dhoweeyay horumarka laga gaaray Maamul-dhisidda Goboladda, sida kan kumeelgaarka ah ee Jubbaland (IJA), Kan kumeelgaarka ah ee Koonfur-galbeed (ISWA), iyo kan Galmudugba. Intaa, waxaa dheer, dhismaha hay’adda (dowliga ah) ee ka jira Puntland.
DAAWO SAWIRRADA XUSKA 1-DA LUULYO OO SI WEYN LOOGA XUSAY MUQDISHO